फागुन १५, काठमाडौं । उप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिनेहरुमा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि रहेको ब्यहोराको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेपछि शर्मा आक्रोशित बनेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले श्वेतपत्रको नाममा झूठा कुरा लेखिएर अश्वेतपत्र जारी गरेको आरोप पनि लगाए । उनले सरकारलाई समर्थन गर्दागर्दै आफुविरुद्ध किन यस्तो अन्यायपूर्ण काम गरियो जवाफ दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग आग्रह गरे ।
‘आफु मन्त्री नै नभएको समयमा गरिएको निर्णयमा मेरो नाम किन राखियो ?’ शर्माले भने, ‘लेख्नुपर्ने नाम किन लेखिएन । यो अश्वेतपत्र किन लेखियो ? भ्रष्टाचार हुन हुँदैन भनेर दुईचार कुरा बोलेको छु त्यसैले हुनुपर्छ ।’ शर्माले थपे, ‘मलाई तर्साउन खोजिएको हो ? मलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको हो ? असत्यको अगाडि कहिल्यै पनि आत्मसमर्पण गर्दिनँ । म तर्सिन पनि तर्सिंदैन ।’
यसअघि बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नाम मुछिएको भन्दै पोखरेलले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रप्रति आपत्ति जनाएका थिए । पोखरेलले ताहाचलस्थित ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने निर्णय देउवा प्रधानमन्त्री र शर्मा गृहमन्त्री हुँदा गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।